Antsika ny filokana resort vakio ny lalaon-teny
antsika ny filokana hetra fanarenana canada
akaiky indrindra casino san clemente ny nofo mangatsiakan'i california
akaiky indrindra casino san antonio tx
akaiky indrindra casino san diego ca
Ny 6-3 fanapahan-kevitra manome milaza ny fahafahana hametraka ny lalàna sy ny fitsipika eo amin'ny fanatanjahan-tena hilokana antsika ny filokana resort vakio ny lalaon-teny. Volafotsy, MLB Kaomisera Rob Manfred, NHL Kaomisera Gary Bettman, ary maro NCAA sekoly dia efa nilaza fa izy ireo dia mendrika ny nanapaka ny fanatanjahan-tena hilokana ny vola miditra raha filokana no hitranga eo amin'ny lalao. Ny fifanarahana mahatonga MGM ofisialy lalao mpiara-miasa amin'ny NBA ka WNBA antsika ny filokana hetra fanarenana canada.
Tsy mivadika ny saram, toy ny ilay antsoina hoe earmarks dia matetika antsoina hoe, dia voalaza fa ilaina amin'ny alalan'ny fisoloana vava ireo ho azy ireo mba handrakotra nitombo ny vola lany mba hahazoana antoka ny zava-nitranga dia tsy ny maha-hosoka na nanaiky lembenana akaiky indrindra casino san clemente ny nofo mangatsiakan'i california. Raha ny Volafotsy sy ny MGM CEO Jim Murren nidera ny tsirairay ny asa sy mitsangana ao amin'ny tsirairay ny indostria, ny tsipiriany momba izay ny fiaraha-miasa manokana dia midika no voafetra. Ny Fitsarana Tampony ao amin'ny United States (DOG) nazerany ny Matihanina sy ny tsy Matihanina Fanatanjahan-tena Fiarovana ny Asa tamin'ny volana Mey akaiky indrindra casino san antonio tx. Delaware, ary New Jersey efa nanatevin-daharana Nevada tao fanatitra-draharahan'ny feno sportsbooks. Ny NBA hoy ny fifanarahana amin'ny MGM manome ny casino orinasa "tsy irery" zo NBA sy WNBA tahirin-kevitra sy ny marika ho roa ny tany-monina nomerika sy lalao asa akaiky indrindra casino san diego ca.
Ny fiaraha-miasa hiteraka any amin'ny tsara indrindra azo atao lalao sy ny fialam-boly traikefa ho an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiasana ny marina, tena-ny fotoana NBA sy WNBA tahirin-kevitra, ary ny fiaraha-ezaka mba hihazona sy hanatsara ny fahamarinana ny lalao," Volafotsy nanamafy.
Akaiky indrindra casino san antonio texas